Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Bangkok dia maniry boaty fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Boaty fizahan-tany any Bangkok
Ny sehatra tsy miankina Thailandey dia manolotra modely ho an'ny Bangkok Tourism Sandbox, manantena ny fisokafan'ny orinasa indray, saingy amin'ny mpanjifa voafetra ho an'ny olona vita vaksiny ihany.
Ny sehatra tsy miankina dia nanolotra fepetra 3 hanokafana ireo orinasa, ao anatin'izany ny fampiroboroboana ireo orinasa manaraka ny torolàlana momba ny fiarovana Coronavirus ary ny tahan'ny vaksiny 70% eo amin'ireo mpiasa.
Tolo-kevitra faharoa ny fampiasana Digital Health Pass ho an'ireo mpanjifa vita vaksiny.
Ny tolo-kevitra fahatelo dia ny hanomboka tetik'asa fanamoriana amin'ny orinasa mpivarotra sasany izay milaza fa vonona ny hisokatra indray, manaraka ny fepetra henjana.
Araka ny filazan'i Sanan Angubolkul, filohan'ny Chambre du Commerce Thai, dia nanolotra fepetra 3 hanokafana ireo orinasa ny sehatra tsy miankina, ao anatin'izany ny fenitra toy ny SHA + (SHA PLUS), hampiroborobo ireo orinasa manaraka ny torolàlana momba ny fiarovana Coronavirus sy ny tahan'ny vaksiny 70% eo amin'ireo mpiasa. Ny maodely Sha Plus dia ampiasaina amin'ny tetikasa Phuket Sandbox ankehitriny.
Ny tolo-kevitra faharoa dia ny fampiasana Pass Digital Health ho an'ireo mpanjifa vita vaksiny, amin'ny alàlan'ny angon-drakitry ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka, ary ny fanekena ireo mpanjifa afaka mampiseho ny valin'ny fitsapana ATK, ka izay afaka manao izany dia aza misalasala mampiasa ireo serivisy ireo. amin'ireo orinasa ireo
Ilay sosokevitra “Pass Digital Health”Dia azo ampiasaina amin'ny olona vita vaksiny izay voarakitra ao amin'ny rindranasa“ Doctor Ready ”na“ Moh Prom ”, izay mihatra amin'ireo izay nisoratra anarana ho an'ny jabs nomen'ny governemanta.
Ny tolo-kevitra fahatelo dia ny hanomboka tetik'asa fanamoriana amin'ny orinasa mpivarotra sasany izay manambara ny tenany ho vonona hisokatra indray ary afaka manaraka tsara ireo fepetra.
Mikasika ny sehatry ny indostria kosa dia efa ampiasaina ny maodely "Factory Sandbox" hanokana ireo mpiasa tratry ny aretina ary hanome vaksiny azy ireo hampitomboana ny fahatokisana ny sehatry ny fanondranana.
Nalefa tamin'ny 1 Jolay 2021, ny Phuket Sandbox ahafahan'ny mpitsidika iraisam-pirenena vita vaksiny feno hisidina mivantana mankany amin'ny toerana aleha ary hijanona ao amin'ny nosy tsy misy karantina. Ny trano fandraisam-bahiny dia mila miantoka farafaharatsiny 70% ny mpiasan'izy ireo no nahazo vaksiny - ny tahan'ny tsimokaretina mitovy amin'ny isan'ny mponina ao Phuket, izay miteraka tsimatimanota amin'ny COVID-19. Na dia tsy manakana ny olona tsy hisambotra COVID-19 aza ny haavon'ny fiarovana avo lenta, mampihena be ny mety hisian'ny aretina mafy sy hopitaly io.
Ny governora lefitr'i Phuket, Andriamatoa Piyapong Choowong, dia nanambara: "Te-hanamafy aho fa manohana an'i Phuket Sandbox. Izahay dia manome antoka fa azo antoka ny olona ao amin'ilay nosy ary ny mpitsidika rehetra dia afaka mihazakazaka tsara ny Sandbox ary manohy mandray ireo mpizahatany maro kokoa any Phuket. ”